Ary izany fanambarana izany dia sarotra ny tsy mitovy hevitra. Indrisy anefa fa, ny antsika rehetra amin’ny fotoana rehetra amin’ny fomba iray na hafa afaka ny ho tonga any hifandray amin’ny raharaha heloka bevava mba hanao toy ny voampanga, ny voampanga, ny vavolombelona na ny niharam-boina
Tsara homarihina fa ny amin’izao fotoana izao ny olon-drehetra dia manan-jo anie mahay fanampiana ara-dalàna heloka bevava ny mpisolovava, na inona na inona ny sata ao amin’ny heloka bevava ny dingana.
Manam-pahaizana, izay manome tolotra ireo dia antsoina hoe mpisolovava
Izany akory tsy milaza fa ny olona manana ny marina tsy mba hanome kalitao solontena ara-dalàna, ary tsy ny fanompoana malalaka.
Ao amin’ny lalàna misy be dia be ny toro-lalana, ny isany avy, sy ny mpahay lalàna avy ao amin’ny isan-karazany mombamomba. Mazava ho azy, tsy an-kanavaka, mpisolovava manokana ny paroasy ary manana ny ambony ara-dalàna ny fanabeazana. Fa ny hany heloka bevava mpisolovava manana ny maha-sarobidy ny fahalalana ary traikefa eo amin’ny sehatry ny-pitsarana. Ny antony fa izany no zava-misy fa ny manam-pahaizana manokana saika isan’andro ny fiatrehana ny tena toe-javatra izay mitaky ny mahafeno fepetra ara-dalàna ny fanampiana.Dia tena tsy azo lazaina momba ny mpiaro ny faritra hafa, ohatra, ny teknisianina izay asa atao dia mifandray amin’ny fianakaviana sy ny lalàna